प्रत्येक ४ वर्षमा जब विश्व फुटबल कपको समय आउँछ, फुटबलका शुभेच्छुकहरू आफ्नो निन्द्रा र अन्य गहिरा सम्बन्धहरूको मूल्य चुकाउन तयार भएर बसेका हुन्छन् । तर, कतारमा आगामी वर्षको विश्वकप फुटबलका लागि चुकाइएको मूल्य भने त्यो भन्दा निक्कै धेरै छ ।
गत फेब्रुअरीको एक प्रतिवेदनले भन्छ कि सन् २०११ यता जहिले यो मध्यपूर्वी राष्ट्रले विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने अवसर जितेको थियो, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालका ६५०० भन्दा बढी आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको छ ।
द गार्जियनका अनुसार मृतकमध्ये धेरैजसो २०० बिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा दोहामा बनाउँदै गरिएको विश्वकप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न रहेका थिए । यस्तो मृतक कामदारको संख्या त्यो भन्दा अझै धेरै हुनु पर्दछ किनकी त्यस तथ्यांकमा फिलिपिन्सजस्ता केही देशका कामदारहरूको संख्या जोडिएको छैन ।
मृत्युको मुख्य कारण अत्यधिक तापक्रमको आघात, थकान, निरासा र आत्महत्या रहेको छ । उनीहरू आफ्नो परिवारबाट हज्जारौं किमी टाढा थिए । उनीहरूको जीवनको अन्तिम क्षण अनिश्चिततापूर्ण थियो । आधिकारिक अभिलेखको अस्पष्टताले गर्दा अस्पष्टता नै उनीहरूको मृत्युको परिभाषा बन्यो ।
हामी त्यस्तो फुटबल खेल कसरी सजिलै हेर्न सकौंला, जसका लागि हज्जारौं मानिस मरेका छन् । के हामी त्यस्तो स्टेडियममा बसेर फुटबलको असली मज्जा लिन सकौंला, जसको निर्माणमा त्यतिका मान्छेले आफ्नो जीवन दिएका छन् ? कि यो खेल नै बहिष्कार गर्ने वा अन्यत्रै सार्ने हो ?
वास्तविक त्रासदी त के हो भने कतारमा जे भयो, त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन । न त पूर्वाधार निर्माणको काम नै नयाँ हो न त त्यसको मानवीय मूल्यको अभिलेख नै । सन् १९९० मा इटालीमा यतिधेरै भरमार निर्माण र मर्मतसंभार भएका थिए, जसको पैसा दशकौं लगाएर तिर्न परेको थियो ।
सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भ्रष्टाचार र अध्याधिक खर्चको भार उस्तै थियो । जब ब्राजिलले त्यस कामका लागि १४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्‍यो, ब्राजिलजस्तो धर्तीकै सबैभन्दा फुटबल अनुरागी भएको देशमा त्यसका विरुद्ध ठूल्ठूला जनप्रदर्शन भएका थिए ।
पछिल्लो सन् २०१८ मा रुसमा भएको विश्वकपसँग सम्बन्धित विवादहरू पनि कम थिएनन् । मस्कोले ४ वर्ष अघि क्रिमियालाई अधिनस्थ गरेको थियो । यसबापत् यो टुर्नामेन्ट नै अन्यत्र सार्नु पर्ने आव्हान भएका थिए ।
पूर्वी उक्रेनको आकासमा मलेसियाली एयरफ्लाइट १७ लाई रुसी मिसाइलले आक्रमण गरी खसालेपछि यस्तो मागको होहल्ला झनै बढेको थियो । रुसको फुटबल क्षेत्रमा हुने नश्लीय विभेद, क्रुर दमन र देशको एलजिबिटी समुदायको अपराधिकरणको चर्चा आफ्नो ठाउँमा छँदै थिए ।
फिफा फुटबल कपको सञ्चालक निकायले गर्ने भ्रष्टाचारको व्यापक चर्चा हुने गरेकै छ । सन् १९३४ को विश्वकप मुसोलिनीका लागि इटालीमा फासीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने द्रुतमार्ग बनेको थियो । फुटबल क्षेत्रमा निर्दोषिताको खोज हाँस्यास्पद र असम्भवको बीचमा कतै भएजस्तो लाग्दछ । तर विगतमा भएकमा कुनै पनि पापले कतारमा भएका मानव अधिकार विरोधी घटनालाई ओझलमा पार्न सक्दैन ।
के यो टुर्नामेन्टलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ ? हो, त्यसो गर्न सकिने उदाहरण छ । सन् १९८२ मा कोलम्बियाले सन् १९८६ को टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट राजीनामा दिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति बेलिसारियो बेटानकुरले त्यसको कारण पर्याप्त आर्थिक क्षमताको अभाव बताएका थिए । साथैले उनले ‘फिफा र यसका सदस्यहरूको अतिशयोक्तिमा समावेश हुने समयको अभाव’ भनेर उल्लेख नै गरेका थिए ।
यद्यपि जर्मन, नर्वे र डच राष्ट्रिय टोलीहरूका क्वालिफाई म्याच अगाडि मानव अधिकारको गञ्जी लगाएकाहरूको प्रदर्शन हुने गरेको छ तर पनि कतार टुर्नामेन्ट रोकिने सम्भावना छैन । फिफाले विगतमा पनि यस्ता राजनीतिक भनाई र प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गर्दै कुनै कारबाही गर्ने गरेको छैन ।
त्यसो भए, मैदानमा होस् वा स्क्रिन अगाडि हाम्रा सामु के उपाय बाँकी रहन्छ र ? हामी असमानता र अन्यायलाई बढाबा दिने संचरनाहरूको आलोचना गर्न सक्दछौं । कतारको मरुभूमिमा विश्वकप फुटबललाई अगाडि बढाउन सहिद हुनेहरूको परिवारको आय र क्षतिपूर्तिको सवाल उठाउन सक्दछौं । दोहाले भारत र श्रीलंकामा भुइँतहको फुटबल विकासका लागि लगानी गर्न सक्दछ । त्यहाँ स्टेडियमहरू निर्माण गर्न तिनीहरूको नाममा नामाकरण गर्न सक्दछ, जसले दोहा स्टेडियम बनाउँदा जीवन गुमाए ।
यी घटनामा कतारको आधिकारिक प्रतिक्रिया यस्तो हुने गरेको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको मृत्यु र जीवनको क्षति हाम्रा लागि दुःखदायी छ । तर, यस्ता क्षतिहरू ती समुदायको जनसांख्यिकी र मृत्यदरको दायराभित्रै छ ।’ यसमा औल्याएअनुसार कतारी नागरिकलाई जस्तै विदेशी कामदारलाई पनि ‘निःशुल्क प्रथम श्रेणीको स्वास्थ्य सेवा’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले उनीहरूको मृत्युदरलाई घटाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
यस्तो बेला अरु धेरै चिज गर्न नसकिएला । सायद हामी आफूले पाएका सुअवसरहरूको पछाडि हुने मानवीय क्षतिहरूको मूल्य बुझ्न सक्नेछौं । सायद, मृत्यु, राजनीति र पुँजी योजना पनि खेल नै हुन वा खेलकै विपरितार्थ हुन भन्ने बुझ्न सक्ने छौं । सायद हामीले हामीलाई आगामी टुर्नामेन्टमा हुने यस्ता स्थितिबारे अवगत गराई रहन सक्ने छौं ।
साउद चाइना मोर्निङ पोष्टबाट ।